Madaxwaynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay Hogaamiyaha China. - Caasimada Online
Home Warar Madaxwaynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay Hogaamiyaha China.
Madaxwaynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay Hogaamiyaha China.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Prof Xasan Shiiq Maxamuud ayaa halbalyo loogu diray oo ku qotonta guusha uu gaaray Xi Jinping noqday hoggaamiyaha cusub ee Shiinaha.
Anigoo ku hadlaya Magaca shacabka soomaaliyeed iyo dowlada soomaaliya waxaan aad ugu faraxsan nahay halkana hanbalyo ugu direynaa Hogaamiyaha iminka talada qabtay ka dib ee Xi Jinping,waxaana u rajeyneynaa guul iyo hormar,waxaa sidaasi warsaxaafadeedka ku sheegay Madaxweynaha soomaaliya.
Sidoo kale madaxweynaha soomaliya ayaa hadalkiisa waxa uu intaasi ku daray in uu ku kalsoon yahay hogaamiyaha cusub ee dalka shiinaha uu yeeshay in hormar ka dheer kuwii hore ee wadanka soo maray uu la imaannayo Xi Jinping oo hada noqday hogaamiyaha cusub ee dalka shiinaha.
Madaxweynaha soomaaliya Pro Xasan shiiq Maxamuud oo wakiil ka ah shacabka soomaaliyeed iyo xukuumada soomaaliya ayaa isagoo ka hadlaya hanbalyada uu u diray Xi Jinping ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowlada shiinaha iyo soomaaliya uu ka dhaxeeyo xariir saaxiibtinimo oo soo jiraan ah,waxa uuna dhanka kale uu shaaca ka qaaday in uu sii socon doono xariirkaasi.
Waxa uuna madaxweynha oo ku dheeraaday u hanbalyeynta hogaamiyaha cusub ee ku guuleysatay hogaanka dalka waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in la xoojiyo xariirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya soomaaliya iyo shiinaha,
Mr ayaa haatan waxa uu la wareegay aqalka weyn ee shiinaha lagaga aramiyo eek u yaala Bijiin,ka dib markii uu la wareegay jagooyinka sarsare ee Xisbiga iyo militeriga awoodda badan ee Shiinaha.